Gị iPhone bụ eleghị anya gị ihe nile. Ya mere, ọ bụghị ihe ọhụrụ na ị ịtọ gị kwa ụbọchị mkpu na gị iPhone na-atụ anya ya na-eteta ị ngwa. Na-adịbeghị anya gara aga Otú ọ dị, iPhone Mkpu a mara iji mee ka a ole na ole nsogbu n'ihi na ọrụ. Nsogbu na a nkwarụ mkpu usoro bụ na ọ pụrụ ọgbaghara na gị dum ụbọchị. Ọ bụrụ na ị mbubreyo na-eteta ihe niile ị na-eme n'ụbọchị a ga-eme n'oge. Ndị a mkpu nsogbu na-Otú ọ dị mgbe niile na-aga na-ahụ otú ọ na-akwụ ogwe aka onwe gị na ụzọ dị iche iche iji mee dị iche iche mkpu mbipụta. Ka-amalite na kasị nkịtị nsogbu na nso nso emetụta fọrọ nke nta niile iPhone ọrụ.
1. Oti mkpu na ada ada na-arụ ọrụ n'oge ìhè ego
Na-adịbeghị anya gara aga, iPhone Mkpu okpu na-arụ ọrụ n'oge ìhè ego na November. The Mkpu nanị jụrụ na-arụ ọrụ na ọ bụ ezie nnọọ ọtụtụ ndị kọrọ nsogbu, a ngwọta e ahụghị ruo mgbe e mesịrị. Ya mere olee otú ị pụrụ igbochi nke a si na-eme gị na iPhone?
Ị na-eme site mwube ugboro ugboro Mkpu ka megide otu onye. Ndị setịpụrụ ugboro Mkpu enweghị nsogbu a.
2. Nnọọ Low Oti mkpu na Ringer Mpịakọta
Ị bụ otu n'ime ndị na-ehi ụra site na gị mkpu si gbanyere mkpọrọgwụ n'obi? Ọ bụrụ na a na-eme gị a otutu, ọ dị mkpa ka ị mụta otú ka olu na oti mkpu gị si ringer. Na iPhone, ọ bụ nnọọ mfe; i nwere ike ịgbanwe olu site na iji olu elu na olu ala buttons na n'akụkụ nke ekwentị.
3. ị na-echefu ịtọ gị mkpu
Ị na-arụsi ọrụ ike na-echeta Ka ịtọọ oti mkpu maka gị ọzọ ụtụtụ? I nwere ike mfe idozi nsogbu a site mwube ugboro ugboro Mkpu dị ka anyị hụrụ tupu. The ndị ọzọ na bụ inwe Siri Ịtọ mkpu maka gị. Ị nwere ike dị nnọọ na-Siri ka gị kwa ụbọchị wakeup mkpu. A bụ otú.
Siri emegharị gị kwupụtara n'iwu ma ọ bụrụ na ị chọrọ Siri ka a wakeup mkpu na 7am, niile i nwere ime bụ ịgwa Siri ime otú ahụ. Ị nwekwara ike ịrịọ Siri ka ego gị Mkpu ma ọ bụ gbanyụọ gị Mkpu. Ọ bụrụ na ị bụ n'ezie ọrụ n'aka nke a s otu ụzọ iji hụ unu ghara ichefu ịtọ Mkpu.
4. The iPhone mkpu-aj u-arụ ọrụ gị
Ọ bụrụ na ị nanị adịghị amasị mkpu aj u na iPhone nke ọtụtụ ndị ga-ekweta na-adịghị na egwu, ị nwere ike ịtọ music si gị ọbá akwụkwọ na-eteta gị elu. A bụ otú
Ẹkedori Elekere ngwa na mgbe ahụ enweta na Oti mkpu na bọtịnụ. Enweta na + iriba-ama tinye ọhụrụ mkpu ma ọ bụ họrọ otu dị na oti mkpu ka gbanwee ya. Enweta na ụda na mgbe ahụ bulie a song gị oke ka dị ka mkpu. Mgbe ahụ enweta na azụ na-azọpụta.
5. Ị ya asị Mgbe oti mkpu vibrates nakwa
The vibration atụmatụ na iPhone pụrụ ịbụ nnọọ ike na mgbe ụfọdụ ị dị adịghị chọrọ ya. Ị nwere ike mfe gbanyụọ vaibret nhọrọ na oti mkpu gị site na-eso ndị a dị nnọọ mfe nzọụkwụ.
Enweta na ụda na ekwentị gị. Ị ga-ahụ abụọ nhọrọ ebe a, vaibret on mgbanaka na vaibret on-agbachi nkịtị. Gbanyụọ ma ndị a nhọrọ.
N'ezie ị pụrụ ime ka o azụ site na-eme na-abụghị. Ozugbo mere, oti mkpu gị agakwaghị vaibret.
6. mfịna Tie Button
Avery nnukwu nsogbu na iPhone mkpu bụ na mgbe ị na-enweta na Tie na mgbe ahụ gaa na-abọ ihuenyo, ọ gaghị ekwe omume ịmata otú ogologo oge tupu mkpu gara ọzọ. Nanị ụzọ na-arụ ọrụ site na nke a bụ nsogbu bụ na-aga azụ ka Mkpu ngwa na mgbe ahụ ịgbanyụọ oti mkpu na mgbe ahụ ka ọ laghachi azụ on. I nwere ike na-dị nnọọ na-ahapụ ya na peeji a ozugbo ị see Tie bọtịnụ.
7. Mgbe ị chọrọ ịkwụsị mkpu
Ị bụ ụdị onye kpọtere tupu oti mkpu gị ma na-achọ iji gbanyụọ ya tupu ya yiri mgbaaka? N'ụzọ dị mwute n'ihi unu, e nweghị ụzọ ime nke a ma e wezụga site na ịga na azụ n'ime Oti mkpu na ngwa. Ọ bụ na-ewe oge ma nanị ụzọ ọ ga-mere.
The n'elu bụ ụfọdụ n'ime ihe ndị kasị nkịtị nsogbu ị pụrụ-eche ihu mgbe eji gị iPhone si mkpu usoro. Ihe ngwọta ndị dị mfe otú ị na-ekwesịghị-enwe otu nsogbu n'ihi na kwa ogologo.
> Resource> iPhone> iPhone Oti mkpu na Nsogbu na Nchọpụta nsogbu